कुराकानी Archives - Page 12 of 14 - Samudrapari.com
अर्बौं लगानी गर्ने एनआरएन छैनन् : भवन भट्ट
बिबी एयरवेजका अध्यक्ष भवन भट्टसँग नेपालवाणी नेटवर्कको वाणीबहसमा कुराकानी । किन केका लागि बीबी एयरवेजको अन्तर्राष्ट्रिय उडान ? राष्ट्रको लागि आवश्यकता पूर्ति गर्न । यसका चुनौतीहरू पनि होलान नि ? अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू जुनसुकै व्यवसायमा हुन्छन् । नेपाल एयरलाइन्सको आवश्यकता पूरा गर्छ बिबी एयरवेजले ? हामीले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने यसले आवश्यकता पूरा गर्नेछ । बीबी एयर नेपाल एयरलाइन्सको काउन्टरपार्ट बन्नेछ । सुरुवाती व्यापार कस्तो भयो ? यो सिजनभरिका लागि हाम्रो उडान फुल छ । ...
‘मेकअप गर्न आएन’
२९ वर्षीया पुष्पा बस्नेतको नाम सिएनएन नोमिनी १०१२ को नोमिनेसनमा परेपछि उनको चर्चा चुलिएको छ । विगत ८ वर्षदेखि निर्दोष भएर पनि कारागारभित्र सजाय काट्न बाध्य थुपै्र बालबालिकाको सहारा बनिरहेकी बस्नेत बालबालिकाका लागि समर्पित हुन पाउनुले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाएको बताउँछिन् । व्यवसायी पूर्णबहादुर तथा सरिता बस्नेतका तीन सन्तानमध्ये माहिली छोरी पुष्पा सामाजिक सेवामा स्नातक, प्रारम्भिक शिक्षामा पोस्ट ग्य्राजुयट हुन् भने हाल उनी सोसल वर्कमा स्नातकोत्तर गर्दैछिन् । सम्पन्न परिवारमा जन्मिएकी पुष्पा सानै...
सरकारले नेपाल प्रहरी संगठनको २३ औं नेतृत्वकर्ताकारुपमा कुवेरसिंह रानालाई नियुक्त गरेपछि उनलाई शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोहबीच गृहसचिव नविन घिमिरेले दर्ज्यानी चिन्ह लगाइदिएका छन् । ततपश्चात् नवनियुक्त महानिरीक्षक रानाले आजै आफ्नो पदभार ग्रहण गरेका छन् । दिउँसो करिव २ बजे नवनियुक्त आईजीपी रानालाई प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकारीदेखि जवानसम्मका सदस्यले लामबद्ध भई हेडक्वाटरमा स्वागत गरेका थिए । हेडक्वाटरमा बधाई दिन चाहने अधिकारी मध्य आज डिएसपीसम्मको समय तोकिएको र उनलाई बधाई दिन ...
माओवादीको पुर्ख्यौली सम्पत्ति बाँड्दैछौँ : गुरुङ
असारमा दुई टुक्रा भएको एकीकृत नेकपा माओवादीले पुर्ख्यौली सम्पत्ति बाँड्ने भएको छ । एमाओवादी र नेकपा–माओवादीले एक दुई दिनभित्रै पेरिसडाँडासहित देशभरका चल अचल सम्पत्ति बाँड्ने टुंगो लगाएको छ । माओवादी विभाजन भएपछि सम्पत्ति विवाद चुलिँदै गएको थियो । चितवनलगायतका केही जिल्लामा जिल्ला पार्टी कार्यालयका विषयलाई कुटाकुट पनि भयो । विवाद बढेपछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले कार्यदल बनाएर यस विषयलाई टुंगो लगाएका हुन् । वैद्य माओवादीले द्वन्द्वकालका के...
‘नांगो तस्बिर दिन्न’
मोनिका दाहाल, नायिका मोनिका दाहाल सिन्धुली घर भई हाल कपनको सरस्वतीनगरमा बस्दै आइरहेकी छिन् । केही चलचित्र र टेलिश्रृंखलामा अभिनय गरेकी उनी कलाकारिता लाई नै पेशा बनाउन रुचाउँछिन् । ब्रिलियन्ट कलेजमा स्नातक पढ्दै गरेकी उनी चलचित्र, अध्ययन र व्यवसायलाई सँगै लाने बताउँछिन् । चलचित्रमा केही नराम्रो कुरा हुन्छ भन्ने थाहा छ तर त्यसबाट बच्ने प्रयास गरेकी छिन् उनले । सेक्सलाई सामान्य मान्ने उनी सेक्सको दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्छिन् । ‘सेक्स प्रकृतिको नियम हो यसलाई तोड्नु हुँदैन, यो नै तोडेपछि महिलाको के ...
‘ज्ञानेन्द्रले झन्डै गोली ठोकेर मारे’
मान्छेले तपाईंका कुरा बढो चाख मानेर सुन्छन् तर सिरियस्ली लिन्छन्जस्तो लाग्छ कि हावा भन्छन् ? सिरियस्ली लिन्छन् नि । नत्र फर्कीफर्की पदमा आउ भनेर किन अनुरोध गर्थे ? एमाले, राजा र माओवादी सबैलाई चाहिने मजस्तो मान्छे को छ ? राजासँग पनि तपाईंको सिरियस कुरा भयो ? यति सिरियस कुरा भयो कि झन्डै गोली हानेर मारे । मलाई ४० मिनेटको समय दिएर बोलाइएको थियो तर कुरा गर्दागर्दै तीन घन्टा बित्यो । राजालाई के योजना सुनाउनुभयो ? देश विकासको पूरै योजना मसँग थियो, मैले फटाफट सुनाएँ । प्रभावित भएर राजाले भने, 'ले...
‘धुर्मुसले अर्की ल्याए सुन्तली पनि पोइल जान्छे’
धुर्मुससँग भेट नभएको भए ? म सुन्तली नै हुँदैनथेँ । कुञ्जना भएर कलाकारिता मात्र गरिरहेकी हुन्थें । कुनै रात बेडमा धुर्मुसको सट्टा अर्कै केटामान्छे सुतेको रहेछ र तपाईंले बिहान ब्युँझँदा मात्रै थाहा पाउनुभयो भने ? सपनामा छु कि बिपनामा भनेर आफैँलाई चिमोठ्थें । बिपना नै रहेछ भने त उठेर भाग्नुबाहेकको विकल्प के होला र ? रेस्लिङ नामक गाईजात्रामा खड्काजी (सीताराम कट्टेल) को ठाउँमा तपाईंले रेस्लिङ भिड्न परेको भए ? गाईजात्रामा म खड्काको पावर सपोर्टरमा छु । आफैँ रेस्लर हुन परेको भएचाहिँ खड्काजीलाई पावर...
जातीय पार्टीको नेतृत्व गर्दिनँ
-अशोक राई उपाध्यक्ष, नेकपा (एमाले) एकल जातीय पहिचानका प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राख्दै पार्टीसँग असन्तुष्ट रहेका एमाले उपाध्यक्ष अशोक राईलगायत केही जनजाति नेताहरूको जिम्मेवारी एमालेले खोसेको छ । अलग विचार समूह खडा गरी समानान्तर गतिविधिसाथ तीन महिनायता पार्टीका औपचारिक कार्यक्रमहरू बहिष्कार गर्दै आएका उपाध्यक्ष राईलगायत नेताहरूलाई पार्टीको अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टीले आफ्नो विचारको सम्बोधन नगरे अलग पार्टी बनाउने घोषणा गरेका उपाध्यक्ष राईसँग असन्तुष्ट समूहको योजनाबारे सौर्यकर्मी राम...
कागज आदानप्रदान भा’थ्योः पुर्वराजा शाह
-मैले साच्चिकै उतार्न खोजेर उतार्‍या भए यो भन्दा धेरै तपाइंले देख्नुहुन्थ्यो । -हाम्रा धेरैजसो देवता ढुंगाका हुन्छन् । चुपै लागेर बस्छन् । कुन समयमा जनताले उठ भन्छन्, जनताले समय भयो भन्छन्, केही न केही गर्नुपर्छ । त्यो समयमा ढुंगा बोल्छ । -कहिलेकहिले लाग्छ, अझ अलिकति विकेक पुर्‍याएको भए यतिसम्म हुने थिएन कि । -म बाचुन्जेल पार्टी खोल्दिन, म मरेपछि अरूले के गर्छन्, थाहा छैन । -जनताले नारायणहिटी एकचोटी छाडेर हेर न भन्याजस्तो पो लाग्या’छ । हाम्रो माझमा आएर एकचोटी हिडिदेऊ, बसिदेऊ, भन्याजस्तो प...
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई ब्राजिलमा गत साता सम्पन्न दिगो विकाससम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन 'रियो प्लस ट्वान्टी'मा सहभागी भई सोमबार स्वदेश फर्कने बेला विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा पत्रकारहरुसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं ब्राजिलको रियो दि जेनेरियो जानुअघि देशको राजनीतिमा ठूला घटना भएका छन्। यस्तो बेला रियो दि जेनेरियोमा तपाईंले भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग के कुराकानी गर्नुभयो? रियो प्लस ट्वान्टी १० वर्षयताको विश्व स्तरको सबैभन्दा ठूलो सम्मेलन हो। त...
जापानी समुदायसंग घुलमिल बढाउन जरुरी
ढिलै भए पनि पर्यटनमा राम्रो सुरुवात
‘ काठमाडौंमा मोनोरेल – मेरै कार्यकालमा’
‘मोदीलाई देउवाले भन्न सक्नुपर्छ, बाँधकै कारण नेपाली डुब्नु भएन’